Ebe obibi ndị bi na China dị na ụlọ ahịa Garage, Akpaaka akpaaka nke ụlọ ọrụ Garage Ọnụ Ụzọ, Standard Lift Garage Door Drum Manufacturer
Nkọwa:Ogige ụlọ ọrụ na-echekwa ebe obibi,Ogwe akpaaka na-arụ ọrụ na akpaaka,Dọketi Dog na-agba chaa chaa,Oghere Ndị Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ Polyurethane,,
Home > Ngwaahịa > Na-aga n&#39;ihu n&#39;Ọnụ Ụzọ > Ogige ụlọ ọrụ na-echekwa ebe obibi
Ngwaahịa nke Ogige ụlọ ọrụ na-echekwa ebe obibi , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ogige ụlọ ọrụ na-echekwa ebe obibi , Ogwe akpaaka na-arụ ọrụ na akpaaka suppliers / factory, wholesale high-quality products of Dọketi Dog na-agba chaa chaa R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ụlọ Ụlọ Nlekọta Ụlọ Mbibi nke Ụlọ Nche  Kpọtụrụ ugbu a
Ntugharị Ntugharị Nhazi Garage Ụlọ  Kpọtụrụ ugbu a
Bibiri Aluminom Alloy Garage Sectional Ọnụ Ụzọ  Kpọtụrụ ugbu a
Ogwe osisi na-ebipụta osisi Aluminum Alloy Garage Door  Kpọtụrụ ugbu a
Oghere ụlọ dị na Aluminom Alloy Alloy  Kpọtụrụ ugbu a
Ngalaba Garage Na-agafe Nzuzo  Kpọtụrụ ugbu a
Ogwe Nchekwa Mgbochi Ime Obodo Nhazi Garage  Kpọtụrụ ugbu a
Ogige Ụlọ Nche na ebe nchekwa dị jụụ  Kpọtụrụ ugbu a
Ugboro abụọ na-adọba ụgbọala na ngwongwo Polyurethane  Kpọtụrụ ugbu a
Oghere na-arụ ọrụ na Aluminom na-abaghị uru  Kpọtụrụ ugbu a
Mpempe akwụkwọ Akpaka Akpaka nke Aluminom  Kpọtụrụ ugbu a
Aluminom Alloy Automatic Residential Sectional Garage Door  Kpọtụrụ ugbu a
Ogige ụlọ mposi na-arụ ọrụ ntanetị  Kpọtụrụ ugbu a
Carport Aluminum Alloy Garage Door  Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ Nche Ụlọ Nche na-esite n'èzí  Kpọtụrụ ugbu a
Aluminom Garage Ọnụ Ụzọ Ụlọ  Kpọtụrụ ugbu a
Oghere na-akpaghị aka na Aluminom Alloy Ngalaba Garage Ọnụ Ụzọ  Kpọtụrụ ugbu a
Aluminum Tempered PC Sheet Nkebi nke Oghere Ụlọ  Kpọtụrụ ugbu a
Aluminom Alloy Ngalaba nke Garage Ọnụ Ụzọ Ụlọ  Kpọtụrụ ugbu a
Aluminium Alloy Ngalaba nke Garage n'Ọnụ Ụzọ  Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ Ụlọ Nlekọta Ụlọ Mbibi nke Ụlọ Nche Ọnụ ụzọ nke oghere ụlọ mposi bụ nke dị elu nke ike, nke siri ike na nke na-adịgide adịgide na-eguzogide ya, nke na-eji usoro ntinye akwụkwọ ntụ ntụ ike iji zụọ ọka osisi. Ụlọ ọrụ ụgbọala na-arụ ọrụ ụgbọala...
Ntugharị Ntugharị Nhazi Garage Ụlọ Ọnụ ụzọ nke oghere ụlọ mposi bụ nke dị elu nke ike, nke siri ike na nke na-adịgide adịgide na-eguzogide ya, nke na-eji usoro ntinye akwụkwọ ntụ ntụ ike iji zụọ ọka osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala na-eji ụgbọala eme ihe...
Bibiri Aluminom Alloy Garage Sectional Ọnụ Ụzọ nkọwa nchịkọta: ọnụ ụzọ oghere: W = 2860mm * H = 2450mm faceplate: 2700mmH = 2450mm ihe onwunwe: Aluminom alloy, 2.0mm ọkpụrụkpụ panel: Akpụchapụta osisi na-edepụta akwụkwọ, ọganihu na igbe nke igbe,...
Aluminom alloy oghere ụlọ nkọwa nchịkọta: ọnụ ụzọ oghere: W = 2860mm * H = 2450mm faceplate: 2700mmH = 2450mm ihe onwunwe: Aluminom alloy, 2.0mm ọkpụrụkpụ panel: Akpụchapụta osisi na-edepụta akwụkwọ, ọganihu na igbe nke igbe, nkwekọrịta nchedo aka,...
Ngalaba Garage Na-agafe Nzuzo Uzo efefe Sectional Garage Door - Large size, na-abụghị ọkọlọtọ, elu-achọ, na mgbakwunye na n'ozuzu mkpuchi, kwes mkpuchi, akara, corrosion, ọkụ, na ihe ndị ọzọ chọrọ na-emeghe ụzọ maka elu àgwà chọrọ. A na -ejikarị...
Ogwe Nchekwa Mgbochi Ime Obodo Nhazi Garage Ọnụ ụzọ nke oghere ụlọ mposi bụ nke dị elu nke ike, nke siri ike na nke na-adịgide adịgide na-eguzogide ya, nke na-eji usoro ntinye akwụkwọ ntụ ntụ ike iji zụọ ọka osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala na-eji ụgbọala...
Mpempe akwụkwọ Akpaka Akpaka nke Aluminom Ọnụ ụzọ ụzọ nke ụlọ ntà nwere nnukwu ụlọ, nke nwere ike ịdị na-adịgide adịgide, nke na-eguzogide ya, nke na-eme ka a na-ebipụta akwụkwọ osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala na-eji ụgbọala eme ihe na-eji usoro ọrụ dị...
Ugboro abụọ na-adọba ụgbọala na ngwongwo Polyurethane Ọnụ ụzọ nke oghere ụlọ mposi bụ nke dị elu nke ike, nke siri ike na nke na-adịgide adịgide na-eguzogide ya, nke na-eji usoro ntinye akwụkwọ ntụ ntụ ike iji zụọ ọka osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala...
Aluminom Alloy Automatic Residential Sectional Garage Door Ọnụ ụzọ nke oghere ụlọ mposi bụ nke dị elu nke ike, nke siri ike na nke na-adịgide adịgide na-eguzogide ya, nke na-eji usoro ntinye akwụkwọ ntụ ntụ ike iji zụọ ọka osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala...
Ụlọ na-arụkwa ụgbọala na-echekwa ebe obibi Ọnụ ụzọ ụzọ nke ụlọ ntà nwere nnukwu ụlọ, nke nwere ike ịdị na-adịgide adịgide, nke na-eguzogide ya, nke na-eme ka a na-ebipụta akwụkwọ osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala na-eji ụgbọala eme ihe na-eji usoro ọrụ dị...
Aluminum Tempered PC Sheet Nkebi nke Oghere Ụlọ Ọnụ ụzọ nke oghere ụlọ mposi bụ nke dị elu nke ike, nke siri ike na nke na-adịgide adịgide na-eguzogide ya, nke na-eji usoro ntinye akwụkwọ ntụ ntụ ike iji zụọ ọka osisi. Ụlọ ụgbọala ụgbọala na-eji...
Aluminom Alloy Ngalaba nke Garage Ọnụ Ụzọ Ụlọ Nkọwapụta oge: --Matụta: aluminom alloy, 2.0mm ọkpụrụkpụ --Panel: ịkụcha akwụkwọ osisi n'elu, ọganihu na igbe nchekwa igbe, nkwekọrịta nchedo aka, nkwekorita panel 40mm. --Color: porcelain na-acha...
Aluminium Alloy Ngalaba nke Garage n'Ọnụ Ụzọ Nkọwapụta oge: --Matụta: aluminom alloy, 2.0mm ọkpụrụkpụ --Panel: ịkụcha akwụkwọ osisi n'elu, ọganihu na igbe nchekwa igbe, nkwekọrịta nchedo aka, nkwekorita panel 40mm. --Color: porcelain na-acha...
China Ogige ụlọ ọrụ na-echekwa ebe obibi Ngwa
A ga-ewu ụlọ ọrụ ntanetị a na-eji eme ihe n'oge gara aga ka ọ bụrụ akụkụ nke otu akụkụ .Anyị na-ejikọta panel ahụ n'akụkụ nke ọ bụla site na usoro nwelite na-enweghị atụ. A na - arụzi ụdị nsụgharị ndị ọzọ nke ọnụ ụzọ ntinye ụgbọelu site na ọtụtụ panel na-ejikọta akwụkwọ mpịakọta ahụ na usoro usoro egwu nke ndị rollers na-eduzi. Ọnụ ụzọ na-edozi ụzọ ma ọ bụ usoro mmiri nke torsion ma ọ bụ ụzọ isi iyi mgbatị. Ụzọ nchịkwa a na-achịkwa nke a na-achịkwa iji meghee ụlọ mgbochi na-agbakwụnye nchebe, nchekwa, na nchekwa
• Oghere ndị na-agba ụgbọ mmiri nke ala alumini bụ ọnụ ala, ìhè, nchara-nkwụsị, na njedebe dị ala. Ha na-adị mfe ịbanye n'ihi na aluminom adịghị ike nakwa na ha adịghị ike-ebe ọ bụ na aluminom bụ nke ọma.
• Fiberglass na ọfịs ụgbọala na-arụ na vinyl bụ nkeji dị iche iche, na-ejikọta isi nchara n'azụ fiberglass ma ọ bụ akpụkpọ anụ vinyl. Ha nwekwara polyurethane nke a na-eme ka ọkpụkpụ, ma ọ bụ ụdị ihe mkpuchi ọkpụkpụ ọzọ. Ọnụ ụzọ ndị a nwere ike ijikọta ọnụ ụzọ ụlọ nchara, ma bụrụ ezigbo osisi (nke bụ fiberglass units), mana ha nwere ike ịdị oke ọnụ karịa nchara ígwè.
• Ọnụ ụzọ ígwè na-adịkarị ma dị n'ụdị dịgasị iche iche, na-enye ume na nchebe, na-efu-asọmpi, ma nwee ike ịnweta uru ịzụlite nhọrọ. Enwere ike ọzọ na ọkwa abụọ ma ọ bụ atọ nke ígwè ígwè nke nwere nọmba nkwụ ala (oghere 23-24).
• Ụlọ ndị na-adọba ụgbọala na-enye ezigbo mkpesa, mana ha na-arụ ọrụ dị elu ma nwee ike ịdị ọnụ. Obere ụgbọala na-akwụ ụgwọ ọnụ ala nwere ike ịgba ma gbajie ngwa ngwa.
Ogige ụlọ ọrụ na-echekwa ebe obibi Ogwe akpaaka na-arụ ọrụ na akpaaka Dọketi Dog na-agba chaa chaa Oghere Ndị Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ Polyurethane Ogige Ụzọ Nlekọta Ebe obibi